देखिएका लुटेरा र नदेखिएका लुटेरा – Chitwan Post
देखिएका लुटेरा र नदेखिएका लुटेरा
सरकारले तोकिदिएको पढाइको शुल्कभन्दा १२ देखि १५ लाखसम्म ज्यादा रकम विद्यार्थीबाट असुलेर मेडिकल कलेजहरुले जनता लुटेको खबर आयो । लुट्न त यी मेडिकल कलेजहरुले पोहोर र परार साल पनि गज्जबले लुटेका थिए । त्योभन्दा अघिल्ला वर्षहरुमा पनि गरिब जनतालाई यिनले निचोर्नसम्म निचोरेका थिए । कसैले भान्छाको प्रयोजनको लागि कागती निचोरेझैँ निचोरेका थिए भने कसैले मेसिनमा राखेर उखु निचोरेझैँ निचोरेका थिए । धेरै वर्षदेखि बिचरा डाक्टर र नर्स बन्न चाहने विद्यार्थीका बाबुआमालाई मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले बाँच्नै मुस्किल हुने तरिकाले शोषण गरेका थिए । बाँच्नै मुस्किल पारेका थिए । मुस्किलले सास फेरिरहेका अभिभावकहरुले सोचेका थिए, यी लुटेराहरुले सधैँभरि यसरी नै लुटिरहने छन् ।
यिनलाई अकासमा सूर्यचन्द्र रहुन्जेल र पृथ्वीमा प्राणी, पानी र जमिन रहुन्जेल कसैले कानुनी कारबाही गर्न सक्ने छैनन् । तर, यसपालि गज्जब भो ! देशभरिका लुटेरा मेडिकल कलेजमध्ये हाम्रा प्रिय डाक्टर हरिश्चन्द्र न्यौपानेको नेतृत्वमा अन्य नेपाली इमानदार नागरिकहरुले संयुक्तरुपमा लगानी गरेका चितवन मेडिकल कलेजले आफ्नो अपराध स्वीकार गरेर जनताबाट लुटेको पैसा फिर्ता गर्ने निर्णय ग¥यो ।
हुन त, चितवन मेडिकल कलेजले उसको आँगनमा त्यही कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरुले बेजोड आन्दोलन नगरेका भए सायद बढी लिएको दामको बन्डल ओकल्दैनथ्यो होला । त्यसैले, चितवन मेडिकल कलेजले जनताबाट खाएको अपच पैसा छाद्यो । यो मेडिकल कलेजलाई जनताको पैसा छाद्न बाध्य पार्न नेत्रविक्रम चन्दको यतिबेला सरकारद्वारा प्रतिबन्धित माओवादी पार्टीले पनि सहयोग गरेजस्तो बुझिएको छ । फेरि नेत्रविक्रमका छोरा प्रकाश पनि त्यही मेडिकल कलेजमा पढ्दा रहेछन् ।
देशभरिका लुटेरा मेडिकल कलेजमा आन्दोलन नहुनु र आन्दोलनको सुरूआत यही कलेजबाट हुनुलाई नेत्रविक्रमसँग पनि जोडेर हेरिएको छ । फेरि यसपालि कलेजको मनोमानीसहितको अपराधकर्मको विरूद्ध चितवनका नागरिक समाज पनि भित्रभित्रै खनियो । यहाँसम्म कि एक जना भाषणप्रसादले त कुनैबेलाका जनताका प्रिय डाक्टर हरिशलाई जनताको पैसा गैरकानुनी हिसाबले शोषण गरेकोमा “ठग”को संज्ञा दिँदै पक्राउ गरेर कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत गरे । भाषणप्रसादको मान्छेलाई जुरूकजुरूक पार्ने खालको भाषणले पनि चितवन मेडिकल कलेजलाई पैसा छाद्न बाध्य पारेको नागरिक समाजमा चर्चा अहिले पनि चलिरहेको छ ।
देशभरिका सिडिओले अन्यअन्य जिल्लामा सञ्चालित लुटेरा मेडिकल कलेजलाई ठगी शीर्षकमा औँला ठड्याउन नसकिरहेको अवस्थामा यिनै भाषणप्रसादको तर्कसंगत कुराको प्रभावले भनिएको छ कि चितवनका सिडिओ जीतेन्द्र बस्नेत चितवन मेडिकल कलेजबाट दाम फिर्ता गराउन निकै कडारुपमा प्रस्तुत भए ।
चितवन मेडिकल कलेजमा भएको आन्दोलन र यसको प्रतिफलका रुपमा हरिश एण्ड कम्पनी लुत्रुक्क परेर पैसा फिर्ता गर्न राजी भएपछि बल्ल गृहमन्त्री बादल र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको घैँटामा घाम लाग्यो । यिनले पनि तुरून्तै देशभरिका मेडिकल कलेजहरुले जनताले रगत–पसिनाद्वारा संकलन गरेर बुझाएका रकम जो नियमविपरीत हो त्यो रकम फिर्ता नगरे ठगी मुद्दा लगाउने निर्णय गरे ।
एकबारको जुनीमा बादल र गिरिराजले राम्रो काम गरिहाले । यो निर्णयको सकारात्मक असर देशभरि पर्नेमा कुनै शंका रहन्न । तर, यो खालको लुटको अन्त्य यही तरिका अपनाउँदा सकियो वा बाँकी रहेको छ यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरूरी छ । बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने मान्छेको जीवनमा धनभन्दा इज्जतै प्यारो हुन्छ । चितवन मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुअघि चितवन मेडिकल कलेजका यतिबेलाका हर्ताकर्ता डा. हरिश्चन्द्र न्यौपाने चितवन जिल्लाका बिरामीहरुको सेवामा समर्पित भएर इज्जत कमाएका डाक्टर हुन् । खासगरी, शल्यक्रियाका लागि यिनी अनुभवी र दक्ष छन् भन्ने जिल्लावासीको मनमा आज पनि छ । यहाँनेर प्रश्न के उठेको छ भने इज्जत कमाएका डाक्टर हरिशको नेतृत्वमा सञ्चालित चितवन मेडिकल कलेजले पैसाका लागि किन इज्जत फ्याँक्यो ? के खालको बाध्यता छ, जब कि यतिबेला डा. हरिशलगायत त्यस मेडिकल कलेजमा लगानी गरेकाहरुलाई जनताको पैसा ठग्न आवश्यकै छैन । एउटा डाक्टरको आम्दानी अहिले पनि परिवार पाल्न र मोजमस्तीसहित विलासी जीवन बिताउन काफी छ ।
जानकारहरुका अनुसार भित्री पाटोका भन्न अप्ठ्यारो लाग्ने कुराहरु यस्ता छन् :
मेडिकल कलेजहरुसँग राजनीतिक दलहरुले चुनाव खर्च र कार्यकर्ता पाल्नका लागि निकै कडारुपमा प्रस्तुत भएर चन्दास्वरुप ठूलै रकम माग गर्छन् । चन्दा नदिऊँ राजनीतिक दलहरु हुन् । यिनीहरु नै सरकारमा पुग्छन्, अनेक खाले नीति–नियम बनाएर अप्ठ्यारो पार्छन् । चन्दा दिऊँ आफ्नो घरखेत बेचेर चन्दा दिने कुरा भएन । आखिर पैसा त जसरी पनि विद्यार्थीको नाममा जनतासँगै लिनुप¥यो । कलेज सञ्चालन खर्च अनिवार्य चाहिन्छ । पढाउने प्राध्यापकहरुलाई पैसा दिनुप¥यो । बिजुली–पानी, सरसफाइ, मर्मत र कर्मचारीहरुको खर्च पनि विद्यार्थीमार्फत नै संकलन गर्नुपर्ने यिनलाई बाध्यता आइलाग्छ । यी सबै परिस्थितिलाई हेर्दा के देखिन्छ भने राजनीतिक दलहरुले मूल संगठनसहित भ्रातृ संगठनहरुका लागि चन्दा माग्ने कामले पनि मेडिकल कलेजहरुलाई जनताको रगत चुस्न बाध्य पारेको सीधै देखिन्छ ।
फेरि, मेडिकल कलेज र अस्पताल सञ्चालकहरुको समस्या यत्तिमै सीमित छैन । विभिन्न टोल र सामाजिक संघसंस्थाहरुले पनि चन्दा माग्ने धन्धालाई निरन्तरता दिएका छन् । यिनीहरुको मुख बुझो लाउने बाध्यता पनि मेडिकल कलेजहरुलाई छँदैछ । अब फेरि बटारिएका ठूला पाखुरावाला भाइहरुलाई दसैँतिहार खर्च, घुमघाम र दारूपानी खर्च नदिए कामै चल्दैन । भैपरी आउने खर्च शीर्षकमा भुन्टे र कालेहरुलाई दिनैप¥यो । समूह–समूहमा आउने हात्ती ग्रुप, परेवा ग्रुप, मयूर ग्रुप, कुखुरा ग्रुपवाला भाइहरुको गर्जो टारिदिने काम पनि यिनै मेडिकल कलेज र अस्पताल सञ्चालकहरुको भागमा परेको देखिन्छ । सरकारले रोजगारी दिएर युवाहरुलाई पाल्न नसकेपछि यस्ता निजी कलेज र अस्पतालहरुले पाल्न परेको अस्पताल सञ्चालकहरुले निन्याउरो मुख बनाएर भन्ने गरेका छन् ।
फेरि यतिबेला नयाँ समस्या के खडा भएको छ भने उपचार गर्न आएका बिरामी मर्नेबित्तिकै डाक्टरले लापर्बाही ग¥यो भन्दै आन्दोलन गर्ने चलनै चलाइएको छ । आन्दोलनकारीहरुलाई थामथाम–थुमथुम पार्न कम्तीमा दसवटा लाखका बन्डल ओछ्याउन पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सधैँभरि बन्डल ओछ्याउन कठिन हुँदा सानो समूहका हुल्लरबाजहरुलाई पुलिसको डण्डाबाट ठीक पार्ने नीति पनि अपनाइएको देखिन्छ । सायद पुलिसले शान्ति सुरक्षा बहाल कार्यमा प्रयोग गर्ने गाडीहरुका लागि पेट्रोल र डिजेल पनि मेडिकल कलेजहरुले खुसुक्क दिने गरेका होलान् । सरकारले दिने डिजेल र पेट्रोल पर्याप्त नहुने हुँदा पुलिसले सरकारको मुख ताक्नुको सट्टा यिनै मेडिकल कलेज र अस्पतालहरुका अगाडि टाउको कन्याउने गरेका पनि हुनसक्छन् । मेडिकल कलेज र अस्पताल सञ्चालकहरुका अगाडि यसरी अनेक शीर्षकमा पैसा बगाउनुपर्ने अवस्था एकातिर देखिन्छ भने यिनले अस्पताल र मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दाका बखत स्वीकृति लिनकै लागि पनि लाख होइन करोड नै “माथि” घूस दिएका हुन्छन् । पहिले नै त्यति ठूलो रकम घूस बुझाएपछि त्यो रकम त जसरी पनि उठाउनुपर्छ भन्ने ध्याउन्न यी मेडिकल कलेज र अस्पताल सञ्चालकहरुमा हुन्छ र यिनले विद्यार्थीकै नामबाट जनता मार्ने काम गर्छन् । सीधै जनता नमारेर घुमाएर यो तरिकाले मार्छन् ।
अहिलेसम्म जनताको माझमा नआएको तर बाठाटाठाहरु सबैले थाहा पाएको विषयचाहिँ के पनि छ भने अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुले तोकिएको सरकारी मापदण्ड पूरा गरे÷नगरेको जाँच्न “मेडिकल काउन्सिल, स्वास्थ्य विभाग र मन्त्रालय” बाट बेलाबेलामा टोली आउने गर्छ । टोलीमा कम्तीमा तीन जना र बढीमा सात–आठ जनासम्म आउने गर्छन् । यिनको काम भनेको कमसल काम गर्ने मेडिकल कलेज र अस्पतालहरुलाई “क्लिन चिट दिने” अर्थात् सब ठीकठाक छ भन्ने प्रमाणपत्र दिने हो । लटरपटर गर्नेहरुलाई ठीक छ भनी स्वीकृति दिएबापत् यी मेडिकल कलेज र अस्पतालहरुका “ज्वाइँसाहेब”हरुलाई कलेज अस्पताल सञ्चालकहरुले मोटो रकम गोजीमा हालिदिनुपर्छ । चितवनको हकमा तिनलाई होटल ग्लोबल, रोयल सेन्चुरी, सेन्ट्रल पाम, आइसल्यान्ड होटल, गार्डन रिसोर्टहरुमा खाइपिइको बन्दोबस्त मिलाइदिनुपर्छ ।
अतिरिक्त मनोरञ्जन भए अझै बेस भन्ने खालको माग “ज्वाइँसाहेब”हरुको हुने गर्दछ । अब यसरी छानबिन गर्दा के देखिन्छ भने सीधा हेर्दा मेडिकल कलेजहरु जनता लुटेराको रुपमा रहेका देखिन्छन्, तर भित्रीरुपमा खोजबिन गर्ने हो भने मेडिकल कलेज र अस्पतालहरुलाई हतियार बनाएर यिनीहरुमार्फत धेरैथरीका व्यक्ति र व्यक्तिका समूहहरुले जनतालाई लुटिरहेको देखिन्छ । कुरा प्रस्ट छ, जनता लुटिएका छन् । यो सत्य हो, तर फरकचाहिँ के छुट्याउन जरूरी छ भने देखिएका लुटेरा एक छन् भने नदेखिएका लुटेरा अनेक छन् । अब जनताबाट दाम लुटिरहेका लुटेरा अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुलाई सरकारले यो तरिकाले कठालो समातेर लुटमाथि बन्देज लगाएर ठीक काम त गरेको छ, तर मेडिकल कलेज र अस्पतालहरुलाई दुहुनो गाई बनाइरहेकाहरुलाई चाहिँ यो सरकारले कसरी नियन्त्रण गर्छ, त्योचाहिँ अल्लि अप्ठ्यारो विषय छ । सरकारले धेरै बुझ्न पर्दैन, यत्ति बुझे हुन्छ– समस्या समाधान गर्न देखिएका लुटेरालाई मात्रै नियन्त्रण गरेर हुँदैन, नदेखिएका लुटेराहरुलाई पनि सीधा नमिले घुमाउरो पाराले भए पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । होइन भने अहिले समाधान भयो भनिएको समस्या फेरि बल्झेर आउँछ ।
जनप्रतिनिधिको भ्रमण मोह
विप्लव समूहका नेता विरही रिहा
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको कोरोना परीक्षण
पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले भने– बजेट सकारात्मक